Umsakazo umculo nombhalo Kusasa, iSanta Claus iza ukuphrinta
Kusasa kuza iSanta Claus - amanothi nombhalo
Kusasa kufika umbhalo weSanta Claus
Umsakazo umculo nombhalo Kusasa kuza iSanta Claus
Kusasa iSanta Claus iza
Izibani ezimibalabala, umhlobiso wesiliva,
Ingane ene-crib, izimvu nenkunzi,
I-Shaggy bear kanye ne-Panther
Ngingathanda ukuba nayo.
Yilethe kusasa, ulethe
Ipulazi enenkukhu kanye ne-rooster,
zonke izinto ezinhle.
Kodwa uyazi isifiso sethu,
wazi izinhliziyo zethu.
Izingane ubaba nomama,
wonke umuntu, sonke sisekhona,
Amanothi avela kuKhisimusi kaKhisimusi kaKhisimusi, iSanta Claus izovula njengefayela elicacile
Iqhwa livela kuphi? umbuzo izingane
Ikhasi elinemibala uKhisimusi - uSanta Claus